National Mining University - Study muUkraine. Education kunze Kwenyika
guta : Dnipropetrovsk
inotangwa : 1899
Musakanganwa kuti kurukura National Mining University
Bvunzai National Mining University
The National Mining University colloquially Padzimba wokuUkraine sezvo NGU riri mu Dnipropetrovsk, guta rechitatu zvikuru vawande muUkraine. It rakaumbwa 1899 sezvo Yekaterinoslav Higher Mining School. Basa kuyunivhesiti ipapo chaiva kupa kuchera indasitiri pamwe zvikuru vanokwanisa pava-, chinangwa ruchiripo kutungamirira utungamiriri yunivhesiti rworudyi kusvikira nhasi, kunyange mumakore achangopfuura zvedzidzo ayo kupa kwakasimbiswa mhiri pakupedzisira zvidzidzo migodhi-chokuita. pari zvino, Chimiro inoumbwa pfumbamwe mano (zvechikoro madhipatimendi). Panguva yaitonga Soviet Union, NGU aiva mumwe nyika pamusoro chairwo masangano yepamusorosoro. Zvinonzi semunhu Ukraine yepamwoyo mumayunivhesiti mune kuera zhinji uye nhasi kunokwezva vakawanda vadzidzi vokune dzimwe nyika.
The National Mining University ndeimwe vaitungamirira establishments dzidzo yepamusorosoro muUkraine. Maererano ratings UNESCO izvozvo kubudirira 6th nzvimbo pakati 200 Top mumayunivhesiti kuUkraine muna 2009.
Panguva University mune 53 madhipatimendi (27 izvo zviri zvikuru nemabhuku) vakabatana mu 9 zvichitaurwawo edzidzo yakazara. Panewo imwe Institute of Extramural Kudzidza uye vanoverengeka post-akapedza kudzidza uye doctorate makosi. Yunivhesiti ane Interbranch Institute of Kuramba Learning, Scientific uye Research Unit, Ukrainian-American mitauro Center, mitauro Center, Ukrainian German Cultural Center, Ukrainian-Spanish-Latin-American Center, Center nokuti Cooperation Ukrainian-Polish, uye Energy Saving uye Energy Management Center. NGU ane rinobatanidza pamwechete Prydniprovsk Science-uye-Technology Center Kwemashoko Protection, Ukrainian-American Lyceum, Marganets College, Pavlograd Technical School uye Motor Transport Technical School.
Pari varipo 16,000 vadzidzi vakanyoresa pamusoro zvirongwa kuyunivhesiti, ndikarega post-akapedza kudzidza uye doctorate vadzidzi vanodzidziswa mu 27 unyanzvi ano. The marezinesi Huwandu mudzidzi rubvumo nokuda kupinda University nerimwe gore iri 1,400 vadzidzi. The zvedzidzo muitiro inopiwa 600 vadzidzisi kusanganisira anopfuura 100 vanachiremba sayenzi, mapurofesa uye 350 musarudzo of Science uye wokushamwaridzana mapurofesa. The kwezvivako yeYunivhesiti (Kazhinji nzvimbo zvakagadzirwa uye zvivako zviri 126049 mativi mamita vanofungidzirwa 29,8 mln. hryvna mutengo), ano kombiyuta hwaro (kupfuurisa 1000 makombiyuta ano) omunharaunda uye pasi pose kombiyuta mambure, raibhurari mari mumavhoriyamu vanopfuura miriyoni imwe, zvinhu simba uye michina rabhoritari hwaro, kunovimbisa refu mwero dzidzo.
Kwemakore 100 makore kuyunivhesiti haako kupfuura 56,000 pava- zvikuru anokwanisa dzakanyatsoumbwa, kupfuurisa 500 monographs uye 250 Kudzidza-mabhuku kuzivikanwa mhiri Ukraine dzakabudiswa, uye pamusoro 150 Doctors nesayenzi uye kupfuura 1,750 Musarudzo nesayenzi vakadzidziswa. YeYunivhesiti kudzidza nhasi vanyori kupfuura 2600 zvigadzirwa mune dzimwe nyika, kwavakanga vakawana kupfuura 300 patents. Mumakore achangopfuura, zvina zvinokosha zvakagadzirwa masayendisiti yunivhesiti zvave kuzivikanwa sezvo zvinowanikwa nesayenzi.
Rubvumo kwacho National Mining University
Nokuti anoshanda National Mining University vadzidzi yokumwe kuti kushandisa paIndaneti Via Ukrainian Munopinda Center.
Rorusununguko Geological Prospecting
Institute of Extramural uye Distance Learning
The National Mining University, inova akakwirira mugodhi yunivhesiti inokosha yedzidzo muUkraine, chake chaibva pane June 16, 1899. Ndicho mukuru yunivhesiti iri Dnipropetrovsk nharaunda; uyezve, akaisa hwaro vemakumi anopfuura maviri nemasangano dzidzo uye zvesayenzi-zvokutsvakurudza Kudya. Pakati pavo pane Dnipropetrovsk Institute of Chemistry uye Technology (1930), Dnipropetrovsk Metallurgical Institute (1930), Northern-Caucasian Mining uye Metallurgical Institute (1931), Scientific-Research Chemistry Institute ainzi pashure Melikishvili muna Tbilisi (1929), Moscow Welding Institute (1925), All-Union Scientific-Research pamasikiro muruzivo rwokugadzira Institute of Pipe Industry (1929), Institute of Physical Chemistry ainzi pashure Lev Pisarzhevsky muKiev (1927), nevamwe.
The mhemberero pamusoro Katerynoslav Higher Mining College (KHMC) achizarura chaiitirwa musi October 12, 1899. Pakutanga Higher Mining College akanga madhipatimendi vaviri - kuchera uye fekitari vavo. Kosi yacho maererano "mutemo KHMC" akafanoona 23 nokuranga: NaMwari kudzidza, yepamusoro masvomhu, Analytical hurongwa, kuvaka hurongwa, Zvakarurama hurongwa, yangu-fekitari Vanamakanika, Physics, kemesitiri, magetsi hurongwa, mineralogy, zvemaumbirwo uye musayenzi pamusoro deposits, geodesy, kuchera iwe, mhangura uye marasha beneficiation, panenge pachivakwa, simbi, mabikirwo simbi, richiswedera uye tichiswedera geometry, ndizvidavirire rangu-fekitari upfumi, michina shanduro kubva German uye French, rubatsiro rwekutanga pa tsaona. Kurovedzwa muitiro yakanga inopiwa 13 vadzidzisi.
Panguva pakutanga imomo yakavambwa ane mbiri dhipatimendi raibhurari, munhu mineralogical miziyamu, mushonga, yokungoitawo uye vachiongorora mumarabhoritari, makabhati neimwe nokuranga.
On June 19, 1912 State Legislative muviri kushandisa rugwaro pamusoro kugadzirisa zviri KHMC kupinda Mining Institute kubva July 1. Panguva iyoyo ndipo zvakashanda masayendisiti hunoshamisa. Vaiva Ya. Grdina, V. Guskov, S. Zaborovsky, L. Ivanova, N. Lebedev, P. Leontovsky, V. Makovsky, L. Pisarzhevsky, M. Protodiakonov, P. Rubin, A. Terpigorev, M. Fedorov, S. Sharbe.
Mabhuku mabasa yesayenzi mune nguva nenguva endangariro hwokugadzira, monographs, mabhuku kudzidza, atlases akapupura yakakwirira yesayenzi rine sangano yedzidzo. The KHMC zvakanyatsorongwa rakapepetwa "Proceedings pamusoro Katerynoslav Higher Mining College" kubva 1905. Kusvika pa 1917 ipapo akanga rakapepetwa 23 nyaya "Proceedings", rakabudiswa pamusoro 500 mabasa nesayenzi kusanganisira monographs uye mabhuku kudzidza. Munguva yedzidzo urongwa inotungamirwa ikoko dzakatangwa zvikoro kwesayenzi uye mirayiridzo: Ya. Grdina akava mumwe havaoni ose cybernetics, A. Terpigorev uye V. Protodiakonov - pachikoro mugodhi, V. Guskov - beneficiation zvicherwa, Leontovsky - pachikoro panenge pachivakwa, geodesy uye geometry pamusoro deposits, M. Lebedev - zvemaumbirwo uye stratigraphy pamusoro Donbas, P. Rubin - simbi uye chemubhotoro kemisitiri, L. Pisarzhevsky - Erekitironi kemisitiri.
mu 1918 Katerynoslav Mining Institute akazarura madhipatimendi itsva mbiri: Paanotarisa (akavharwa 1921) uye Geological Prospecting, uye vakawana kodzero mubayiro nesayenzi dhigirii kuburikidza paruzhinji kudzivirira zvidzidzo zvesayenzi. mu 1921 kwakanga akasika Mechanical weVadzidzisi Vedare pamwe madhipatimendi maviri: Mining-Factory uye Electrical Engineering. The implementation pamusoro unyanzvi itsva zvinosiyana indasitiri budiriro. kunze, mumwe Workers 'weVadzidzisi Vedare yakavhurwa.
kutanga kubva 1930 Mining Institute kudzidziswa nezvokurara chete mugodhi indasitiri uye Geological prospecting nemabasa. mu 1932 pakanga akasimbisa pfungwa panzvimbo madhipatimendi: kuchera, Electrical Engineering, Geological-Paanotarisa.
mu 1920 - 1930 muitiro Zvikoro yesayenzi Achigadzira mberi. Kunyange munguva 1930-s Dnipropetrovsk Mining Institute akarasikirwa chinokosha chikamu chacho cadre mudonzvo (pamusoro 30 vanhu, pakati ayo paiva kunoshamisa mapurofesa) nokuda enyika repressions.
mu 1941, apo hondo reNazi akanga atanga, pamusoro 300 vadzidzisi, vepachikoro uye vadzidzi vakanga basa kuti kumberi. Institute akatizira Sverdlovsk (Urals) uye kuKaraganda (Khazakisitani), akauya chinokosha chikamu midziyo uye masayendisiti tsvimbo Sverdlovsk Mining Institute uye somwanakomana of Moscow Mining Institute, iyo panguva iyoyo yakanga yasvika kuKaraganda zvakare. Anopfuura dzidziso tsvimbo Dnipropetrovsk Mining Institute achiitei mapurani chinzvimbo migodhi emakambani ari Urals uye Republics pamusoro Middle Asia.
Basa Institute hunoramba uchivandudzwa muruoko 1943, rokutanga - muna kuKaraganda, uye gare gare - muna Dnipropetrovsk. Akaparadza zvivako dzidzo uye mumarabhoritari vaiva pasi vakiridzo. Avo Vakararama ichidzokera kubva kumberi. By 1951/1952 zvedzidzo gore vakanga idzva chose pakuvaka Institute, kuisa kushanda ari anofinha experimental kudzidza siyana, mumarabhoritari, dormitories. mu 1951 ipapo rakavambwa ari Mine-Construction weVadzidzisi Vedare. elaborations esayenzi Institute kudzidzisa mudonzvo, mudzidzi dhipuroma zvaMambo kuti nguva dzakanga akaisa matambudziko nokuvandudzwa Donetsk, Kryvyi Rih uye Nikopol manganous nembiya.
Pakazosvika 50-fung rakafa Institute akanga 165 mapurofesa, sanyina mapurofesa uye lecturers, 34 madhipatimendi, 22 mumarabhoritari, 25 makabhati, munhu Geological miziyamu, raibhurari, experimental kudzidza siyana uye kudzidza experimental okudhindira. pa 4 zvichitaurwawo ikoko kudzidza 1942 vadzidzi kubudikidza 9 unyanzvi.
Mugore 1960-s itsva-akavaka uye akadzorerwa inodzidzisa uye rokudzidzisa-rabhoritari zvivakwa, multistoried dormitories matatu vadzidzi uye post-akapedza kudzidza vadzidzi, edzidzo-inogadzirwa okudhindira, mutambo chivakwa, Zvivako ane dzidzo-geodesic experimental kudzidza siyana mumusha Orlivshchyna vakaiswa kushanda.
mu 1970 pana Dnipropetrovsk Mining Institute ikoko vakashanda 474 vadzidzisi, kusanganisira 34 mapurofesa. Huwandu kudzidza mainjiniya equaled 1200 vanhu. Huwandu nezvokurara vakazvigadzirirwa dzidzo yakazara rakanga ichiwedzera, kunyange chikamu-nguva uye extramural yokudzidza nezvimiro uyewo raishanda.
In May 1993 maererano migumisiro State accreditation Dnipropetrovsk Mining Institute akawana mamiriro sangano ane zvionera IV-accreditation pamwero ezvinhu yepamusoro rokudzidzisa uye zita State Mining Academy rweUkraine. mu 1997, Mutungamiri muUkraine chirevo kuti mubayiro Academy yenyika chinzvimbo. In February 2002 tsika yacho restructured kupinda National Mining University. kubva 2010 Yunivhesiti hwakava tsvakurudzo chinzvimbo. Nhasi mumwe vaitungamirira masangano munyika michina kwirirei rokudzidzisa. The University Vakapedza nhaka ruzivo vemazuva kombiyuta michina, uye vanokwanisa kugadzirisa matambudziko yakaoma pakati indasitiri, dzezvoupfumi uye mutemo kukura.
Panguva University mune 51 madhipatimendi (27 izvo zviri zvikuru nemabhuku) vakabatana mu 9 zvichitaurwawo edzidzo yakazara, Institute of Extramural uye Distance Learning, post-girajuweta uye doctorate makosi, Interbranch Institute of Kuramba Learning, Scientific uye Research Unit, Ukrainian-American mitauro Center, mitauro Center, Ukrainian German Cultural Center, Ukrainian-Spanish-Latin-American Center, Center nokuti Cooperation Ukrainian-Polish, Energy Saving uye Energy Management Center, Prydniprovsk Science-uye-Technology Center Kwemashoko Protection, Ukrainian-American Lyceum, Marganets College, Pavlograd Technical School, Motor Transport Technical School bv Al.
Panguva University ipapo kudzidza 12000 vadzidzi, post-girajuweta uye doctorate vadzidzi 27 unyanzvi ano. The marezinesi Huwandu mudzidzi rubvumo nokuti tapinda University ndiyo 1400 vadzidzi. The zvedzidzo muitiro inopiwa 600 vadzidzisi kusanganisira anopfuura 100 Doctor sayenzi, mapurofesa uye 350 Anoda kubhabhatidzwa Science, sanyina mapurofesa. A hwaivapo dzidzo inosimbiswa nokuda dzakabudirira kwezvivako yeYunivhesiti, ano kombiyuta omunharaunda uye pasi pose kombiyuta mambure, raibhurari mari vanopfuura miriyoni imwe mumavhoriyamu, zvinhu simba uye michina rabhoritari hwaro, Newest dzemuchina dzidzo.
Unoda kurukura National Mining University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
National Mining University iri Map
Photos: National Mining University pamutemo Facebook
National Mining University wongororo
Join kukurukura pamusoro National Mining University.
Ukrainian Engineering uye Pedagogical Academy Kharkiv